ပင်မစာမျက်နှာ အာဖရိကဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဆီနီဂေါဘောလုံးဘောလုံးကစားသမားများ Ismaila Sarr ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
LB "ဟုအမည်ပြောင်နှင့်အတူဘောလုံး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်Isma“ ကျွန်ုပ်တို့၏ Ismaila Sarr ကလေးဘဝပုံပြင် Plus ၏မရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများသည်သင့်ကလေးဘ ၀ မှယနေ့အထိထင်ရှားသောအဖြစ်အပျက်များကိုသေသေချာချာဖော်ပြသည်။
အစောပိုင်းဘဝနှင့် Ismaila Sarr ၏ထ။ Image Credits: MixedArticle၊ MrScout, TransferMarket နှင့် Dakarbuzz
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သူ၏အစောပိုင်းဘဝ, မိသားစုနောက်ခံ, ကျော်ကြားမှုမတိုင်မီဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ, ကျော်ကြားမှုပုံပြင်, ဆက်ဆံရေးဟာအသက်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ, မိသားစုအချက်အလက်များ, လူနေမှုပုံစံစတဲ့သူ့ကိုအကြောင်းကိုအခြားအနည်းနည်း-လူသိများအချက်အလက်များမှထမြောက်ပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သူဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်၊ လှည့်စားမှုတွေရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းသိတယ်၊ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ FIFA Forward အတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ သို့သော်ပရိတ်သတ်အနည်းငယ်က Ismaila Sarr ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုအတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသည်ဟုစဉ်းစားကြသည်။ နောက်ထပ် ado မပါဘဲ, ရဲ့စတင်ကြကုန်အံ့။
Ismaila Sarr ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - အစောပိုင်းဘဝနှင့်မိသားစုနောက်ခံ
Ismaïla Sarr သည် ၁၉၉၈ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်တွင်သူ၏မိခင် Marieme Ba နှင့်ဖခင် Abdoulaye Sarr Naar Gaad မှဆီနီဂေါနိုင်ငံအနောက်မြောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။
Ismaila Sarr ၏မွေးရပ်မြို့၊ စိန့်လူးဝစ် (၁၆၅၉ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်) ကိုအနောက်အာဖရိကကမ်းရိုးတန်းရှိရှေးအကျဆုံးကိုလိုနီမြို့တစ်မြို့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံအနောက်အာဖရိက၏ပြင်သစ်ဌာနချုပ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအနောက်အာဖရိကကမ်းခြေမြို့ Ismaila Sarr တွင်သူ၏မိသားစုအရင်းအမြစ်များကိုဖော်ပြထားသည်။
ဆီနီဂေါနိုင်ငံ၊ Ismaila Sarr ၏မိသားစုအရင်းအမြစ်များကိုသိကျွမ်းခြင်း။ Image Credit: Wikipedia
Ismaila Sarr အစောပိုင်းနှစ်များ: အာဖရိကမိသားစုမှအမြန်ဘောလုံးသမားသည်သူ၏အစောဆုံးအပိုင်းများကိုစိန့်လူးဝစ္စတွင်ကစားခဲ့သည်။ သူသည်သူ့မိဘများမှမွေးဖွားခဲ့သောမောင်နှမလေးယောက်နှင့်အတူကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ Papis, Kine, Ndèye Ami နှင့် Badara.
Ismaila Sarr သည်ဘောလုံးသမားဟောင်းတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သောသူ၏ဖခင်လုပ်ကိုင်သောလူလတ်တန်းစားအထက်တန်းကျောင်းမှဆင်းသက်လာသူဖြစ်သည်။ မင်းသိလား?… Ismaila Sarr ၏ဖခင် Abdoulaye Sarr Naar Gaad သည်ဆီနီဂေါနိုင်ငံသားဟောင်းဖြစ်ပြီး ၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်းအနောက်အာဖရိကတွင်ကစားခဲ့သည်။ ဤအချက်ကိုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေခြင်းအားဖြင့်သူ့ဖခင်ကြောင့်သူ၏မိသားစုတွင်ဘောလုံးပြေးပွဲကိုဆိုလိုသည်။
Ismaila Sarr ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင် Buildup
Abdoulaye Sarr Naar Gaad သည်ဘောလုံးကွင်းမှအငြိမ်းစားယူပြီးနောက်အနှစ် ၂၀ ကျော်သည်အခြားအလုပ်များသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်နှင့်အလွယ်တကူလုပ်ကိုင်ရန်အတွက်အတော်လေးလွယ်ကူခဲ့သည်။ ဘောလုံးကွင်းများကိုမြက်စားနေသော်လည်းစူပါအဖေကထိုအမြင်အပေါ်စွဲမြဲထားသည် သူ၏သားများသည်သူတို့၏ပညာရေးကိုဘောလုံးကွင်းအတွက်အပေးအယူမပြုရ။ အစောပိုင်းကတည်းကသူသည် Ismaila Sarr အပါအဝင်သူ၏သားသမီးများကိုစာရင်းသွင်းခဲ့သည် Oumar Syr Diagne ကျောင်း St Louis, Senegal တွင်တည်ရှိသည်။
ကျောင်းကိုမုန်းခြင်း: Ismaila Sarr သည်ကျောင်းကိုမုန်းတီးခဲ့ပြီးသူ၏မိဘအားကျောင်းသို့ပို့ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသဘောမကျပါ။ အမှန်မှာ၊ ကျောင်းစာအုပ်များကိုစာဖတ်ခြင်းသည်သူ့အတွက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ခဲ့ပါ၊ သူနှင့်သူ့အိမ်နီးချင်းများရှိသူများစွာသည်ကျောင်းသို့သွားခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သာဖြစ်ပုံရသည်။ အများအားဖြင့်သူသည်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူဘောလုံးကစားရန်နှင့်ကျောင်းကိုကျော်သွားခဲ့သည်။
Ismaila Sarr ၏မိဘများသည်သူ၏ကျောင်းဆရာများထံမှမကောင်းသောသတင်းများစွာရရှိခဲ့ကြပြီးထိုလုပ်ရပ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလေ့လာတွေ့ရှိပြီးနောက်၎င်းတို့အားသူတို့၏သားအားအရေးယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူတို့သည်သူ့ကိုကျောင်းမတက်စေဘဲအတင်းအကျပ်ခေါ်သွားခဲ့သည် မာစတာချုပ် သူကစက်ချုပ်သင်ယူနိုင်အောင်သူ့ရပ်ကွက်ထဲမှာတစ် ဦး ချုပ်၏လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရေး).
အလုပ်သင်မည်သည့်နည်းတူမဆို Ismaila Sarr သည်စက်ချုပ်ခြင်း၏အခြေခံများကိုသင်ယူရန်လုံလောက်သောနှိမ့်ချသူဖြစ်ပြီးသူသည်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူ၏ ဘောလုံးသြတ္တပ္ပစိတ် သူ့သခင်ကို ဆက်၍ အမှုဆောင်ရန်ခွင့်မပြုနိုင်ပါ။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်သူ၏စိတ်နှလုံးသည်ဘောလုံးကိုလိုချင်နေသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ရဲရင့်သောကောင်လေးသည်သူမချုပ်နှောင်ခြင်းကိုစွန့်ခွာပြီးသူ၏မိဘ၏ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲအစပိုင်းတွင်သူ၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုဆက်လက်ရှင်သန်နေသောကြောင့်သူ၏နှလုံးနောက်သို့လိုက်ခဲ့သည်
Ismaila Sarr ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
Ismaila Sarr သည် Oumar Syr Diagne ကျောင်းတွင်ပဉ္စမနှစ်တွင်ဘွဲ့ရခဲ့ပြီးသူသည်အကြောင်းရင်းကိုစွန့်လွှတ်ပြီး AS Génération Foot နှင့်စမ်းသပ်မှုများတွင်စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ အောင်မြင်သောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအပြီးတွင်လူငယ်လေးသည်ဘောလုံးသင်တန်းတက်ခဲ့သည်။
AS Génération Foot ရှိ Ismaila Sarr အထောက်အထားကတ်။ ချေးငွေများ Alchetron
Ismaila Sarr သည် Sadio Mane နှင့်တူညီသောအကယ်ဒမီတွင်စတင်ခဲ့သည်။ သူသည် AS Génération Foot ၌အလုပ်၏အခြေခံကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းငါ့အလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်အခွင့်အရေးအဖြစ်သင်ယူခဲ့သည်။ သူသည်ဒုတိယဆင့်မှဆီနီဂေါလိဂ်၏ထိပ်တန်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုတိုးတက်အောင်ကူညီခဲ့သည်။ သူသည်ဘောလုံးကိုစိတ်ဝင်စားမှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုကြောင့်ဥရောပသို့ရောက်ရန်အိပ်မက်မက်ခဲ့သည်။
Ismaila Sarr ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - Fame မှလမ်း
တိုင်းပြည်မှ ထွက်၍ ဥရောပ၌ကစားရန်ကံကောင်းသူဘောလုံးသမားများကဲ့သို့ပင်မကြာခဏသွားလိုသည့်နေရာမှာသူတို့၏ပြင်သစ်ကိုလိုနီပြင်သစ်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Ismaila သည်သူ၏မိသားစုကိုစွန့်ခွာကာ FC Metz နှင့်ပထမဆုံးစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။
ငါဟာအသစ်သောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေထိုင်ခဲ့ရသည်၊ သူ့တိုင်းပြည်ကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ခွာဘဲနိုင်ငံခြားမြေပေါ်မှာကစားခဲ့ဖူးတဲ့လူငယ် Ismaila အတွက်တော့မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး အထင်ကြီးရန်လိုအပ်ခြင်းကြောင့် Sarr သည်မကြာခဏသူ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်များ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သောလယ်ပြင်၌ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအလွန်အကျွံကြောင့်ဒဏ်ရာထပ်တလဲလဲခံစားခဲ့ရသည်။ အကြိမ်ကြိမ်ဒဏ်ရာရခြင်းကြောင့်သူ့မိသားစုအတွက်ကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ Sarr ရဲ့အဖေက ၀ င်ခွင့်ပေးတာလေးလေးနက်နက်ပဲ။ ဘောလုံးသမားအဆိုအရ
“ အဖေ့ကိုတောင်မကြာခဏထိခိုက်ဒဏ်ရာရအောင်မလုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော့်ကိုမကြာခဏဖုန်းဆက်ပြီးကျွန်တော်ကစားတဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အော်ဟစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကမကူညီနိုင်ဘူး ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကိုခံနိုင်ရည်ရှိလာတဲ့အထိရန်သူတွေကိုဆက်တိုက်ခိုက်နေဆဲပဲ”
Ismaila Sarr သည် FC Metz နှင့်တိုးတက်မှုကြောင့်သူ့နိုင်ငံ၏အမျိုးသားအသင်းမှခေါ်ယူခြင်းခံရသည်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ သူ့အတွက်အိပ်မက်အမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ၏အသင်းသည်ခေါ်ယူခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်မှာသူ၏ဘ ၀ တွင်အကြီးမားဆုံးသောထိတ်လန့်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ မင်းသိလား?… Ismaila Sarr သည်စပိန်သို့သွားပြီးဘာစီလိုနာသို့သွားနိုင်သည်။ အလားအလာကောင်းသည့်ဘောလုံးသမားကဘာစီလိုနာအားသူ၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုအတွက်စောလွန်းသည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ Sarr သည်စပိန် Giant မှခေါ်ဆိုရန်အလွန်ကောင်းပါသလား။။ ဘာစီလိုနာသည်ဘာစီလိုနာအားဘာကြောင့်ဖုန်းခေါ်သင့်ကြောင်းအောက်ဖော်ပြပါဗီဒီယိုတွင်ရှင်းပြထားသည်။ မိမိအရည်မှန်းချက်ပျေါလှငျအချို့ကိုကြည့်ပါ။
Ismaila Sarr ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - Fame မှထလော့
အထက်ပါဗီဒီယိုတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Ismaila Sarr သည်ဘာစီလိုနာအသင်းအား Rennes အသင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်အတွက်ဂရုမစိုက်ဘဲသူ၏ဂိုးများသွင်းယူခြင်းပုံစံကိုဆက်လက်ကစားခဲ့သည်။ ဤလုပ်ရပ်ကသူ့ကို ၂၀၁၈ ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား၏ဆီနီဂေါအသင်းတွင်အမည်ပေးခဲ့သည်။
Rennes တွင်ရှိစဉ် Ismaila Sarr သည် Sadio Mane ၏ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်သူ၏အရှိန်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် Sarr ၏ရည်မှန်းချက်များသည် Rennes ကို ၂၀၁၈-၁၉ UEFA Europa League နောက်ကောက်အဆင့်၌နေရာယူစေခဲ့သည်။ ယူရိုပါလိဂ်ယူရိုပါလိဂ်ဆုဖလားကိုချီးမြှင့်ခံရခြင်း (အပေါ်ကဗီဒီယိုမှာပြထားတဲ့ပထမဆုံးရည်မှန်းချက်) 2018-19 ကလပ်အသင်းသည်သူ၏လက်မှတ်အဘို့လိုက်ဖမ်းကိုမြင်တော်မူ၏။
8 သြဂုတ်လ 2019 ရက်နေ့တွင် Sarr သည်အသင်း၏စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးကြေးဖြင့် Watford ပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သူသည်ပရီးမီးယားလိဂ်သို့လာရောက်သည့် အချိန်မှစ၍ ထိုနေရာတွင်ရှိနေသည် မိမိအ Ismaila Sarr ၏မြန်နှုန်းနှင့်ပရိယာယ်ကိုအလွန်သဘောကျသော FIFA ကစားသမားများနှင့် Watford ပရိသတ်များအတွက်အချစ်ဇာတ်လမ်းအနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။ သူရေးခဲ့သည့်အချိန်တွင် Watford ၏ရှပ်အင်္ကျီတွင် Sarr ၏ထူးခြားထင်ရှားသောအခိုက်အတန့်သည်ယူနိုက်တက်နှင့်ကစားရပြီးသူသည်ဂိုးတစ်ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီးသူ့အသင်းကိုယူနိုက်တက် 2-0 ကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့သည်။
Ismaila Sarr သည်သူ၏ဆီနီဂေါမျိုးဆက်ပြီးနောက်နောက်ထပ်လှပသောကတိတော်များဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာသို့သက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်မှာသံသယကင်းမဲ့စွာဖြင့် Sadio လည်ဆံ. ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့, သမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Ismaila Sarr ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - relationship ဘဝ
ပရီးမီးယားလိဂ်၏မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်သူကျော်ကြားလာခြင်းနှင့်အတူပရိသတ်အချို့သည် Ismaila Sarr တွင်ရည်းစားရှိသလားသို့မဟုတ်သူအမှန်တကယ်လက်ထပ်ထားခြင်းရှိ၊
အမှန်တရားကတော့ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အရပ်ရှည်ရှည်ချောမောလှပတဲ့အသွင်အပြင်၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မျက်နှာ၊ နှလုံးသားနွေးထွေးတဲ့အပြုံးကြောင့်သူ့ကိုရည်းစားဟောင်းနဲ့ဇနီးပစ္စည်းတွေရဲ့ဆန္ဒစာရင်းမှာထည့်သွင်းထားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုငြင်းစရာမလိုပါဘူး။ သို့သော်အောင်မြင်သောဘောလုံးသမားနောက်ကွယ်တွင် Ismaila Sarr ၏ကံကောင်းသည့်ဇနီးဖြစ်လာသည့်ထင်ရှားကျော်ကြားသောချစ်သူကောင်မလေးရှိနေသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Ismaila Sarr နှင့်သူ၏ဇနီး၏ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ် arရာဝတီ Fat Sy အမည်ဖြင့်သွားသည်။
Ismaila Sarr ဇနီးနှင့်တွေ့ဆုံရန် ပုံချေးငွေများ arရာဝတီ
Ismaila Sarr သည်အသက်ငယ်သောအရွယ်တွင်လက်ထပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။ Dakmail သည်သူ၏ဇနီးထံမှရရှိသောအထောက်အပံ့နှင့် ပတ်သက်၍ DakarBuzz နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းတွင်တစ်ချိန်ကပြောကြားခဲ့သည်။
“ Fat Sy ကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးကူညီခဲ့တယ်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်၏အစားအစာ၊ လေ့ကျင့်မှုနှင့်အနားယူချိန်များကိုစီမံခန့်ခွဲသူဖြစ်သောကြောင့်သူသည်ကျွန်ုပ်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအစီအစဉ်တွင်အတော်အတန်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဘောလုံးကစားသမားအတွက်သွေးဆောင်မှုတွေများလွန်းလို့စောစောစီးစီးအိမ်ထောင်ပြုချင်တယ်၊ တည်ငြိမ်မှုရချင်တယ်။ ”
အောက်ဖော်ပြပါဗီဒီယိုတွင် Ismaila Sarr သည်သူ၏ဇနီး Fat Sy ကိုအလွန်ချစ်ကြောင်း သူသည်ငယ်ငယ်လေးကတည်းကအိမ်ထောင်ပြုရသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Ismaila Sarr ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
Ismaila Sarr ၏ဘောလုံးနှင့်ဝေးကွာခြင်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝကိုသိရှိခြင်းသည်သူ၏ပင်ကိုစရိုက်ကိုအပြည့်အဝနားလည်စေရန်ကူညီလိမ့်မည်။
Ismaila Sarr ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝကိုလေ့လာခြင်း
အချိန်မှီအခြေချရန်သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်စသည်။ Ismaila Sarr သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးတည်ငြိမ်သောအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုပြုလုပ်လိုသောလူငယ်များသည်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်စောစီးစွာကြိုးစားသင့်သည်ဟုယုံကြည်သည်။ သူတို့မှာအလုပ်အကိုင်တွေပျက်စီးသွားစေမယ့်ကိစ္စတွေမလုပ်ဖို့သွေးဆောင်မှုတွေကိုရှောင်ရှားဖို့လိုအပ်တယ်။
ဒုတိယအချက်မှာသူသည်ဘဝကိုနည်းစနစ်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်နည်းကိုအသုံးပြုသောသူဖြစ်သည်။ Sarr သည်အရာများကိုအတင်းအကျပ်လုပ်ရန်အသုံးမပြုသည်၊ သူသည်အရာရာကိုသူ့အရှိန်အဟုန်ဖြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘ ၀ တွင်စာရေးသားချိန်၌ Ismaila Sarr သည် 'ကိုမယုံကြည်ပါ။Tattoo ယဉ်ကျေးမှု'ဒီနေ့ဘောလုံးလောကမှာလူကြိုက်များသည်။ သူသည်မိမိ၏ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်၌သူ၏ဘာသာတရားကိုပုံဖော်ခဲ့ပြီးတက်တူးများ၌သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုမဟုတ်ဘဲမိသားစု၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုနှလုံးသား၌ထားရှိသည်။
Ismaila Sarr ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - မိသားစုဘဝ
ကန ဦး အငြင်းပွားမှုများရှိလင့်ကစား Ismaila Sarr ၏မိဘများကသူတို့၏သားကိုသူ၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုလိုက်လျောရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည့်အတွက် ၀ မ်းသာကြသည်။ စက်ချုပ်အလုပ်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းအားဖြင့်သူ၏အလုပ်တွင်သူ့ကိုကူညီခဲ့သည်။ Sarr အဆိုအရ;
ပြင်သစ်ကိုမသွားခင် Ismaila ကသူ့မိဘတွေကိုဂုဏ်ယူအောင်လုပ်ဖို့ကျိန်ဆိုခဲ့တယ်။ သူ့အဖေ Abdoulaye Sarr Naar Gaad သည်ဘောလုံးမှအနားယူရန်ခက်ခဲသည်။ ယနေ့သူသည်သူ၏အိပ်မက်များကိုပြန်လည်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့်အတွက် ၀ မ်းသာသည်။
Ismaila Sarr ၏မောင်နှမများအကြောင်း - Ismaila Sarr ၏အဆိုအရသူ၏မောင်နှမလေးယောက်နှင့်အတူကြီးပြင်းခဲ့သည်။ သူ၌ Papis Sarr အမည်ရှိသောသူ့အားအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာအကြံပေးအဖြစ်လုပ်ကိုင်ပြီးသူသည်ဒုတိယမိခင်နှင့်တူသောကီနီအမည်ရှိသောညီမလည်းရှိသည်။ သူ၏မွေးချင်းများအနက်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာNdèye Ami ဖြစ်ပြီးအငယ်ဆုံးမှာ Badara ဖြစ်သည်။
Ismaila Sarr ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - လူနေမှုပုံစံစတဲ့
Ismaila Sarr ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့လေ့လာမှုတွေအများကြီးလုပ်ပြီးနောက်မှာသူဟာရိုးရိုးသားသားကောင်လေးတစ်ယောက်ပဲဆိုတာကျွန်မတို့သဘောပေါက်လာတယ် အများကြီးမကုန်ကျကြောင်းလက်တွေ့လိုအပ်ချက်များကို။ အောက်တွင်သူ၏နိုင်ငံသား Cheikhou Kouyatéနှင့်အတူဘောလုံးသမားဖြစ်ပြီးသူတို့နောက်ကွယ်မှကား၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်သာသိရှိရသည်။
Ismaila Sarr ရဲ့ဘဝပုံစံကိုသိကျွမ်းလာခြင်း။ Image Credit: Instagram နှင့် DailyRecord
လက်တွေ့ကျမှုနှင့်ပျော်မွေ့မှုအကြားဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်လက်ရှိ Ismaila Sarr အတွက်ခက်ခဲသောရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။ စာရေးနေစဉ် Sarr သည်ထူးခြားဆန်းကြယ်သောထူးခြားသောကားများ၊ ထင်ရှားသောကားကြီးများကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ပါ၊
Ismaila Sarr ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - မရေမတွက်အချက်အလက်
သူကတစ်ချိန်ကတွဲအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် Sadio လည်ဆံ ဒါန: Ismaila Sarr သည်ဘောလုံးသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်လယ်ပြင်၌သာမကအချို့သောစီနီဂဲလီလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်လည်းထွန်းလင်းသည်။ အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်သူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်ကိုတွေ့မြင်ရသည် Sadio လည်ဆံ သူတို့ကအရှိဆုံးချို့တဲ့ကူညီအဖြစ်ကုသိုလ်ဖြစ်အကြောင်းတရားများအပေါ်။
Ismaila Sarr သည်သူ၏လူများကိုပြန်ဆပ်သည်။ Image ကို Credit: Instagra,
သူ၏အရှိန်အဟုန်နှင့် Dribble - ဖီဖာကစားသမားများအတွက်ကောင်းချီးတစ်ခု - ဖီဖာမှာဘယ်သူမှနှေးကွေးနေတဲ့ကစားသမားကိုသဘောမကျဘူး။ Pace ပါ ၀ င်သောကစားသမားကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်တိုက်ခိုက်သူတစ် ဦး အားတိုက်ခိုက်နေသည်ဖြစ်စေ၊ လိုက်ဖမ်းသည်ဖြစ်စေသင်လိုအပ်သည်။ စာရေးချိန်တွင်အသက် ၂၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော Sarr သည်အရှိန်အဟုန်မြှင့ ်၍ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ FIFA ဂိမ်းကစားသူများအတွက်ကောင်းချီးတစ်ခုဖြစ်သည်။
သူ၏အသက်အရွယ်အတွက် Ismaila Sarr ၏ Pace နှင့် Dribble သည် FIFA Gamers များအတွက်ကောင်းချီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် SoFIFA, FutHead နှင့် GoonerNews
မင်းသိလား?… Sadio မန်းသာ 27 သည်အာဖရိကဖလားနိုင်ငံများတွင် Sarr ၏ 2018 ထက်ပိုမိုအောင်မြင်သော dribbles ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်ုပ်တို့၏ Ismaila Sarr ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများကိုဖတ်ရှုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ At LifeBogger, ကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုအတွက်ကြိုးစားသည်။ မမှန်ကန်သောအရာတစ်ခုခုကိုသင်တွေ့ရှိပါကအောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေပါ။ သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားလေးစားမည်။
Idrissa Gueye ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Kalidou Koulibaly ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Sadio လည်ဆံကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်